TONTOLO IAINANA : Natomboka tao Ankarafantsika ny fifampifehezana
Mahatratra 1500 isan’andro ny tebok’ afo eto Madagasikara, araka ny sary azo avy amin’ny zanabolana. 2 septembre 2020
Midika izany fa tsy mbola lefy ny doro tanety eto amintsika. Karazana biby sy zavamaniry an’arivony maro anefa no may kila sy lany taranaka isan-taona noho io doro tanety io.
Nametraka paikady vaovao hiadiana amin’ny doro tanety ny Minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ka tao amin’ny valan-javaboary Ankarafantsika no nanombohana azy ny zoma teo. Fifanekena sy fifampifehezana niaraka tamin’ireo Raiamandreny ara-drazana no natao, ka natomboka tamin’ny fombafomba ny fotoana. Tonga nanatrika izany ny minisitra tompon’andraikitra, Vahinala Baomiavotse Raharinirina sy ny tale iraisam-paritry ny tontolo iainana Boeny Betsiboka, Ihando Andrianjafy. Fampandraisana anjara ny fokonolona eo amin’ny fikajiana ny valan-javaboary sy famonoana ny afo izay efa fomba fanao hatrizay. “Fandraisana anjara iombonana amin’ny fikajiana ny tontolo iainana, hoy ihany ny minisitra dia hisy ny fiaraha-miasa akaiky eo amin’ny Minisiteran’ny fizahantany sy ny Minisiteran’ny tontolo iainana”. Fantatra mantsy fa ny 12% ny harin-karenan’i Madagasikara dia avy amin’ny fizahantany ary 90% ny mpizaha tany tonga eto dia noho ny valan-javaboary.
Mahatsiaro miasa maina fotsiny nefa tsy misy tombontsoa azo ireo mponina mipetraka manodidina ny valan-javaboary, izay efa nandray anjara hatrany amin’ny fiahiana io valan-javaboary io. Nisy, noho izany, ny famatsiana azy ireo fitaovana entina mihary, toy ny angadin’omby sy tranon-tantely.
Ny ben’ny tanànan’i Marosakoa izay mifehy iny toerana misy ny alan-javaboary Ankarafantsika iny kosa dia nanambara fa maro ny tsindry amin’io alan-javaboary io sy ny mponina, ka anisan’izany ny tsy fandriampahalemana. Mahantra sy tsy fahampian’ny fitaovana famokarana ireo olona monina manamorona io ala arovana io. Ao ihany koa ny tsy fahafahan’ireo mponina, izay mpamboly ny ankamaroany manitatra ny ambaindain’ny fihariany.
“Tokony mba hisy ny tombontsoan’ny vahoaka amin’ny fiarovana ny valan-javaboary, hoy izy, ka nangataka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka izy mba hametraka sy hanorina fotodrafitrasa any an-toerana ; ary hijery ihany koa ny fampitaovana ny kaominina hahafahan’ny tompon’andraikitra manatanteraka tsara ny adidiny manandrify azy ireo”.
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (854) 21 janvier 2021 Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (340) 25 janvier 2021 “Tokony hoesorina na hanala tena izay tompon’andraikitra tsy maharaka ny dian’ ny Filoham-pirenena ” FIRENENA (279) 21 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (79) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (79) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (63) 25 janvier 2021